ပုံထဲမှာ သငျအရငျဆုံး တှရေ့တဲ့ပုံကနေ ပွောပွမယျ့ သငျ့ရဲ့အတှငျးစိတျ
HomeKnowledgeပုံထဲမှာ သငျအရငျဆုံး တှရေ့တဲ့ပုံကနေ ပွောပွမယျ့ သငျ့ရဲ့အတှငျးစိတျ
H October 15, 2021
ဓါတျပုံတှကေနေ ကိုယျ့ရဲ့ ပငျကိုယျစရိုကျနဲ့ မသိစိတျကို သိနိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဓါတျပုံတဈပုံကို ကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ သငျ ပထမဆုံး တှလေို့ကျရတဲ့ အရာကနေ သငျ့ရဲ့ မသိစိတျထဲက ကွောကျရှံ့မှုတှကေို ဖျောပွပေး နိုငျပါတယျနျော။
သငျ့ဘဝမှာ ငယျငယျကတညျးက ခြုပျတညျးထားတဲ့ အကွောကျတရားတှေ ရှိခဲ့ပုံပါပဲ။ သငျ့ရဲ့ခံစားခကျြတှေ ပိုမိုကောငျးလာဖို့ အမနေဲ့ ရငျးရငျးနှီးနှီး နသေငျ့ပါတယျ။ အမနေဲ့အတူ ရှိခြိနျတှေ နညျးတဲ့အခါ ဆုံးဖွတျလကျြတှေ ခတြဲ့အခါမှာ ထိခိုကျမှုတှေ ရှိလာနိုငျပါတယျ။
လိပျပွာရဲ့အဓိပ်ပါယျက ကောငျးတဲ့ အဓိပ်ပါယျပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ဒီပုံကို အရငျမွငျတယျ ဆိုရငျတော့ သငျက အခှငျ့အရေးတှေ လှဲခြျောသှားမှာကို အလှနျကွောကျနတေတျပါတယျ။ လူတှဟော သငျနဲ့အတူ မရှိနလေို့ ခံစားနရေသူလညျး ဖွဈပါတယျ။
ရကျဈဘယျရီသီးက ပုံရဲ့အလယျမှာ ရှိနပွေီး ပုံမှနျအသီးထကျ ပိုကွီးနပေါတယျ။ ပုံမှနျထကျ ကွီးနရေတာကတော့ နှလုံးကို ကိုယျစားပွုထားတဲ့ အခဈြပါ။ သငျက ပုံထဲမှာ ရကျဈဘယျရီသီးကို အရငျမွငျရငျ သငျရှာဖှနေတေဲ့အရာက နှလုံးသားထဲမှာပါ။ သငျ့ရဲ့မသိစိတျထဲ အကွောကျတရားကလညျး နှလုံးသားကို ခုခံနတောပါ။
လူတှေ အကွောကျဆုံးအရာတှထေဲက တဈခုက ပငျ့ကူပါ။ ပုံထဲမှာ ပငျ့ကူကို အရငျမွငျလိုကျရရငျ သငျ့စိတျထဲမှာ သငျ့ပတျဝနျးကငျြက မလုံခွုံဘူးလို့ ခံစားနရေတာပါ။ သငျက ဘေးပတျဝနျးကငျြမှာ တဈခုခု အန်တရာယျရှိနလေားလို့ အသေးစိတျ စဈဆေးနတေတျသူပါ။ အဲဒါကွောငျ့ ပတျဝနျးကငျြက အလှတရားတှကေို ခံစားဖို့ မသှေ့ားတတျပါတယျ။ သငျက အမွဲတမျး အတှေးလှနျတတျသူလညျး ဖွဈပါတယျ။.
အပငျတှကေို ပုံထဲမှာ အရငျမွငျလိုကျရရငျ သငျ့စိတျထဲမှာ ခုထိ မဖွရှေငျးနိုငျသေးတဲ့ ပဋိပက်ခတခြိူ့ရှိနနေိုငျပါတယျ။ တဈခါတရံ အတှေးလှနျတတျစိတျကွောငျ့ လူတှနေဲ့ ဝေးဝေးသှားပါတယျ။
ဝကျဝံရုပျလေးတှကေို ပုံထဲမှာ အရငျဆုံး သတိထားမိရငျတော့ သငျ့အကွောငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး စိတျကနြေပျမှုမရှိသူပါ။ ငယျစဉျကတညျးက ကွောကျစိတျတှနေဲ့ ကွီးပွငျးခဲ့ရသူ ဖွဈတာကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အားမလိုအားမရ ဖွဈနတေတျပါတယျ။
ပုံထဲမှာ ဦးခေါငျးခှံကို အရငျမွငျရငျ သငျက ပွဿနာတှနေဲ့ ကွုံလာရငျ ဆုံးဖွတျခကျြခဖြို့ ခကျခဲသူပါ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျစိတျနညျးပါးလို့ နောကျထပျတဈဆငျ့ တကျဖို့အတှကျ နှောငျ့နှေးနတေတျပါတယျ။ ဘာ့ကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ ငယျငယျက မိဘနဲ့ ရငျးနှီးတဲ့ သူငယျခငျြးတှဆေီက အသိအမှတျပွု လေးစားမှုတှေ မခံခဲရလို့ပါ။
ပုံထဲမှာ သင်အရင်ဆုံး တွေ့ရတဲ့ပုံကနေ ပြောပြမယ့် သင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်
ဓါတ်ပုံတွေကနေ ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်နဲ့ မသိစိတ်ကို သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ သင် ပထမဆုံး တွေ့လိုက်ရတဲ့ အရာကနေ သင့်ရဲ့ မသိစိတ်ထဲက ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို ဖော်ပြပေး နိုင်ပါတယ်နော်။
သင့်ဘဝမှာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ချုပ်တည်းထားတဲ့ အကြောက်တရားတွေ ရှိခဲ့ပုံပါပဲ။ သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေ ပိုမိုကောင်းလာဖို့ အမေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး နေသင့်ပါတယ်။ အမေနဲ့ အတူရှိချိန်တွေ နည်းတဲ့အခါ ဆုံးဖြတ်လျက်တွေ ချတဲ့အခါမှာ ထိခိုက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
လိပ်ပြာရဲ့အဓိပ္ပါယ်က ကောင်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီပုံကို အရင်မြင်တယ် ဆိုရင်တော့ သင်က အခွင့်အရေးတွေ လွဲချော်သွားမှာကို အလွန်ကြောက်နေတတ်ပါတယ်။ လူတွေဟာ သင်နဲ့အတူမရှိနေလို့ ခံစားနေရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရက်စ်ဘယ်ရီသီးက ပုံရဲ့အလယ်မှာ ရှိနေပြီး ပုံမှန်အသီးထက် ပိုကြီးနေပါတယ်။ ပုံမှန်ထက် ကြီးနေရတာကတော့ နှလုံးကို ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ အချစ်ပါ။သင်က ပုံထဲမှာ ရက်စ်ဘယ်ရီသီးကို အရင်မြင်ရင် သင်ရှာဖွေနေတဲ့ အရာက နှလုံးသားထဲမှာပါ။ သင့်ရဲ့မသိစိတ်ထဲ အကြောက်တရားကလည်း နှလုံးသားကို ခုခံနေတာပါ။
လူတွေ အကြောက်ဆုံးအရာတွေထဲက တစ်ခုက ပင့်ကူပါ။ ပုံထဲမှာ ပင့်ကူကို အရင်မြင်လိုက်ရရင် သင့်စိတ်ထဲမှာ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က မလုံခြုံဘူးလို့ ခံစားနေရတာပါ။ သင်က ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ တစ်ခုခု အန္တရာယ် ရှိနေလားလို့ အသေးစိတ် စစ်ဆေးနေတတ်သူပါ။ အဲဒါကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်က အလှတရားတွေကို ခံစားဖို့ မေ့သွားတတ်ပါတယ်။ သင်က အမြဲတမ်း အတွေးလွန်တတ်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။.
အပင်တွေကို ပုံထဲမှာ အရင်မြင်လိုက်ရရင် သင့်စိတ်ထဲမှာ ခုထိ မဖြေရှင်းနိုင်သေးတဲ့ ပဋိပက္ခတချိူ့ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတရံ အတွေးလွန်တတ်စိတ်ကြောင့် လူတွေနဲ့ ဝေးဝေးသွားပါတယ်။
ဝက်ဝံရုပ်လေးတွေကို ပုံထဲမှာ အရင်ဆုံး သတိထားမိရင်တော့ သင့်အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ကျေနပ်မှု မရှိသူပါ။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ကြောက်စိတ်တွေနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ရသူဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ပုံထဲမှာ ဦးခေါင်းခွံကို အရင်မြင်ရင် သင်က ပြဿနာတွေနဲ့ ကြုံလာရင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ ခက်ခဲသူပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်စိတ်နည်းပါးလို့ နောက်ထပ်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အတွက် နှောင့်နှေးနေတတ်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ငယ်ငယ်က မိဘနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆီက အသိအမှတ်ပြု လေးစားမှုတွေ မခံခဲရလို့ပါ။